Tobanka mas (snakes) iyo abeesooyinka ugu khatartsan Afrika (sawiro) – Radio Daljir
Tobanka mas (snakes) iyo abeesooyinka ugu khatartsan Afrika (sawiro)
Seteembar 26, 2018 2:03 g 0
Qaaradda Afrika waxaa lagu tilmaama meelaha ay ku noolyihiin masaska ugu sun khatarsan dunida, kuwaas oo inta badan ah kuwo magacyo kala duwan loogu yeero khatarteedana leh.
Mas kasta iyo abeeso kastaa waxa ay leedahay cirbad looga hortago qaniinyada sumeysan, sidaas darteed waa muhiim in la kala barto magacyadooda iyo waliba midabada ay leeyihiin iyo dalaalka ay ku noolyihiin.
FADLAN HADDII AAD MASASKAAN IYO ABEESOOYINKAAN MAGACAYADOOD AF SOOMAALI KU TAQAAN NALA QAYBSO.
Maanta idin soo gudbinneynaa halaq-mareenka iyo magacyadooda afka Ingiriiska, iyo waliba xawaaraha ay ku ordaan, dheerarkooda, iyo macluumaad kale oo muhiim ah.
Hadaba Hoos kaga boggo Qoraal faah faahsan
1. The African black mamba (dendroaspis polyepis)
Maskan waxaa loo yaqaana black mamba snake waxaa laga helaa oo uu ku noolyahay Afrika, gaar ahaan Kenya kaymaheeda, maskan dheerarkiisa waxaa lagu qiyaasay 4.5 meters, xawaaraha socodka ama inta uu jarrayo waa 20KM saacaddii.
Boogga xiga riix
Maqaalo Kale 275 Wararka 19841
Maxkamada ciidamada Puntland ee Bosaaso oo dil ku xukuntay xubno Daacish iyo Al-shabaab (dhegayso)